तोयानाथ उपेक्षित, तीतोपाटी / आज मैले भद्रकलाको फोन उठाउन सकिन । उनले काम नपरि कहिल्यै फोन गर्दिनन् । त्यसो त काम परे पछि मात्र फोन गर्ने अरु बेला रिप्लाई समेत नगर्नेको पनि कमी छैन । अप्ठयारो परेको बेला विन्ति गर्नेहरु, सहयोग माग्नेहरु मध्ये कतिपयको तितो अनुभव मैले सँगालेको पनि छु । सप्ठेरोमा उनीहरुले सम्झदैनन् शायद उनीहरुको भलो त्यसैमा भएर पनि होला । यो स्वार्थ स्वभाविक पनि हो । विना काम फोन गरेर कसैले डिस्टर्ब गरेको मलाई पनि मन पर्दैन ।
उनको साथीले स्थानिय नागरिकको घर छाडेर भागेको लामै समय भएछ । अब भगौडा हुदाको पिडा पनि चाखिसकिछन । उनलाई पछुतो छ तर उनी त्यस घरमा फर्कन सक्दिनन नत उनले नेपाल जाने अवस्था नै छ । चोरीको मुद्दा लगाएको छ रे । उनले कतैबाट सुनिछन अनि मलाई अब के हुन्छ होला भनेर उनको साथी मार्फत बुझ्न लगाएको रहेछ । दुतावाससँग पनि शायद यसको उत्तर नहोला मैले उनलाई सान्तवना दिने बाहेक अरु के भन्न सक्छु र ? भाग्नको कारण रहर होस वा व्याध्यता ? त्यो नितान्त व्याक्तिगत निर्णयका पछि मैले प्रश्न गरिन । त्यसो गरेर उनलाई झुठो बोल्न लगाउनु र त्यहि कुरालाई आधार मानेर मैले कुनै कथा बन्नु थिएन । म चुप लागे । यति चाही भने आतिन पर्दैन भन्दिनु घर जाने दिन ढिलो चाडो हो एक दिन अवश्य आउनेछ । चोरीको केश नै छ भने त मुद्धाको किनारा नलागेसम्म उम्कने ठाउँ हुँदैन । दैनिक मनमा त्रास लिएर बस्न पर्ने काम किन गर्नु पर्या होला ।
एक महिना पहिलेको कुरा हो । म नेपालबाट कुवेत फर्किसकेको थिईन । एउटा भाई कम्पनीबाट भागेछ । महिनाको १३० केडी सम्म उसको सेलरी आउँथ्यो । ३० खर्च गरे पनि १०० त बचाउन पर्ने हो तर एक सय केडी ६ महिनामा पनि बचाउन छाडेको धेरै भएको रहेछ । उ भईरहेको कमाई जोगाउन नसके पछि धेरै कमाएर जोगाउने भन्दै कम्पनी नै छाडेर भागेको अरे । म कुवेत आएको एक साता नवित्दै अपरिचित महिलाको फोन आयो । उनी रहिछन तिनै भगौडा भाईको धर्मपत्नी । भागेको तिन दिपछिसम्म त घरमा कुरा गर्दै थिए रे उनका पतिदेव तर त्यसपछि त बेपत्ता । उनले धेरै प्रकारले श्रीमान माथि आशंका गर्न थालेकी रहिछन । कतै कुनै केटी लिएर बस्न थालेर पो हो की मलाई कल नगरेको उनको मुख्य आशंका थियो । मैले उनलाई दुई कारण बताए । एउटा उनको शंका जस्तै परिस्थिती र अर्को पुलिसको फन्दामा परेको हुन सक्ने । नभन्दै एक महिना पछि उनको श्रीमान घरमा टुप्लुक्क रित्तो हात र मलिन अनुहार सहित पुगेछन् । कारण त्यही दोश्रो थियो । शुरुमा आउँदा साधु जस्तो त्यो भाई कुलतमा लागेर पछिल्ला दिनमा हिंस्रक बाघ जस्तै हुदै गएको थियो आखिर खोरमा परेरै छाडेछ ।
भरखरैको कुरा हो । एउटा त्यस्तै फोन आयो । त्यो भाई मैले काम गरेकै कम्पनीबाट भागेको दुई साल हुन लागेछ । आज भोली उसलाई काम लाउने साहुले तेरो म्यानेजरको नम्बर दे म तेरो पासर्पोट मागेर भिषा लगाई दिन्छु भन्दैछ दाई म के गरौ हजुरको नम्बर दिन्छु कुरा गरिदिनुन । लौ यो त झन फसादमा पार्ने कुरा । कुवेतमा कम्पनीबाट भागि सकेपछि भगौडा केश लागि सकेको हुन्छ । दोश्रो कुरा उसलाई लिगल गर्न सम्भव नै हुन्न । ठुलै सोर्स भएको साहु पर्यो भने पनि उसलाई लिगल बनाउन कमसेकम ६ सय केडी खर्च गर्नै पर्दछ त्यसमा पनि सवैतिरबाट च्यानल मिलेको खण्डमा । भागेको मानिसलाई फकाई फुल्याई गरेर काम लगाउन त्यो साहुले लेबरको महामारी भएको बेलामा भनि दिएको पनि हुन सक्छ तर ईलिगल भएर नेपाल जान नसके पछि र हरेक दिन डराउँदै हिँडन पर्दा त्यसो भन्ने मान्छे पाउँदा त्यो भाईको आशा जाग्नु स्वभाविक हो तर त्यति सजिलै कसैको भगौडालाई कानूनी रुपमा करार गर्न सजिलो कहाँ हुन्छ र ? भाग्ने बेलामा हजार पटक नसोची लहैलहैमा भागेर फन्दामा पर्ने, अप्ठयारो काम गर्न पर्ने, अपराधिक समुहको हतियार हुने अवस्था आउँछ । भागेर काम गरेर छिटै धेरै कमाउने सपना कसैले नपालेकै बेस ।
हिजै मात्र अर्को एउटा बहिनीले हेटौडाबाट सोधिन दाई म कोभिडको बेलामा ईलिगल खुल्दा नेपाल आएको हुँ अब कुवेत आउन पाउँछु की पाउँदिन होला ? त्यसबेला कुवेत सरकारले ईलिगलहरुलाई स्वदेश फर्काउन ठुलो धन राशी खर्च गरेको थियो । कुवेतमा रहेका हजारौ ईलिगल नेपालीहरुलाई दुई महिना सम्म कुवेत सरकारले खान बस्न दिएर आफ्नै जहाजमा हालेर निःशुल्क रुपमा नेपाल पठाई दिएको थियो । त्यसरी कुवेत सरकारको फण्डिंगमा चार्टर जहाज चढेर नेपाल जानेहरु अहिले कुवेत फर्कने खोजीमा रहेछन । जहाँसम्म कुवेत फर्कन नपाउने भन्ने सूचनामा कुनै कुरा उल्लेख थिएन उसबेला । उनीहरु पुनः चाहेमा कुवेत फर्कन सक्छन भन्ने नै हो तर ग्यारेन्टी त केही कुराको हुँदैन । विगतमा एम्नेटिको सुविधा लिएर नेपाल जानेमध्ये के कति जना पुनः कुवेत आउनु भएको छ ? आउनु भएको भए कमेन्ट गरिदिनु होला जसले कतिपयको जिज्ञासाको समाधान गरिदिने छ ।
घरमा काम गर्ने मात्र नभएर कम्पनीमा काम गर्नेहरु त्यस्ता मानिसहरु भाग्दछन जसले पैसा कमाउने महत्वकांक्षा त धेरै पालेका हुन्छन तर कमाएको पैसा कसरी बचाउने भन्नेमा ध्यान दिदैनन । उनीहरुका लागि भाग्नु रहर जस्तो भई दिन्छ जब भागेर हिड्छन त्यसपछिका दुर्दि को त चर्चै नगरौ भोग्नेहरुले यो लेख पढनु भएको भए कमेन्ट गरि दिनुहोला ।
April 17, 2022 10:52 pm | Ads, Top, ट्रेन्डिङ, प्रवास, फिचर न्युज, मरुभूमि हालचाल, रोजगार, विचार/ब्लग